मंसिर २८ । वन तथा वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने वायो ग्यास प्लान्ट पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा पनि चासोको विषय बन्दै गएको छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने मलमुत्रबाट समेत गोबर ग्यास निकालेर खाना पकाउन सकिने सजिलो माध्यम बायो ग्यास प्लान्ट हो। नेपाल सरकारले अनुदान बढाएपछि जिल्लामा गोबर ग्यास...
मंसिर २८ । चितवनमा चालु आर्थिक बर्षको हाल सम्म सवारी दुर्घटनाबाट ५४ जनाको मृत्यु भएको छ । चालु आर्थिक बर्ष ०७४÷७५ को हालसम्ममा चितवनका विभिन्न स्थानमा भएका ९५ ओटा सवारी दुर्घटनामा परि ८० जना सख्त घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । सवारी दुर्घटनामा परी १ सय २४ जना सामान्य घाइते भएको ट्राफिक...
आनन्द पोखरेल चितवन, २८ मंसिर ।।– मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा हार व्यहोरेका राजनीतिक दललाई समेत लिएर समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि अगाडि बढ्ने चितवनका जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले बिहीबार भरतपुरमा आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका...
मंसिर २७ । चितवनको भरतपुरमा रहेको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज) शिक्षण अस्पतालले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनलाई ब्रेथलाइजर मेसिन प्रदान गरेको छ । मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा दुर्घटना बढेको भन्दै यसको नियन्त्रणको लागि दुई वटा ब्रेथलाईजर मेसिन प्रदान गरेको अस्पतालका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत...
Premium Magento Themes & Extensions Club with 65+ professional designs. Sign up and get your desired themes for as low as $80.